MAALINTA HAWEENKA EE 8 MARCH IYO SIDA LOOGA XUSAY LAASCAANOOD | Toggaherer's Weblog
Maalinta haweenka ee sida wayn looga xuso dhamaanba caalamka ayaa waxaa maanta laga xusay magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool halkaas oo lagu dhigay xaflad si wayn loo soo agaasimay taas oo ay kasoo qayb galeen qaybaha bulshada ee magaalada Laascaanood.
Xafldan oo sidoo kale kasoo qayb galeen dhalinyaro wadata dharka hidaha iyo dhaqanka si wayna usoo jiitay masuuliyiinta Dawlada iyo shacabkii halkaasi kasoo qayb galay ayaa sidoo kale halkaasi waxaa ku sugnaa dhalinyaradaas oo ahayd in muddo ah markii ugu horaysay ee xafdlad ay kasoo qayb galaan dad wata hidaha iyo dhaqanka kana dhacda magaalada Laascaanood.
Ugu horayn waxaa hadalkii furay Isuduwaha wasaarada qoyska iyo haweenka Shukri Mire Aadan oo halkaasi ka sheegtay sababta loo qabtay xafladan iyo ujeedooyinka iyo waliba qiimaha gaarka ah ee ay haweenka ulee dahay maalintan 8 march taas oo lagu qabto dhamaanba daafaha caalamka iyadoo sidoo kale halkaasi kusoo bandhigtay dhibaatooyinka haweenka.
Sidoo kale Yuusuf Axmed Faarax (aflahaar) oo halkaasi ka hadlay una hadlay bulshada rayidka ah ayaa waxa uu si wayn u qeexay dhibaatooyinka dumarka iyo tacadiyada loo gaysan jiray diinta ka hor iyo waliba waqtiyo aan sidaasi u fogayn isagoo sheegay in loo baahan yahay in tacadaiyada dumarka si wayn loo ilaaliyo xuquuqdooda dumar ahaan loona baahan yahay dhankoda inay wax la qayb sadaan ragga.
Ugu danbantii Gudoomiyaha Ururka Yesdo Layla C/laahi Maxamed ayaa waxa ay halkaasi kaso jeedisay warbixino ku saabsan dhibaatada dumarka iyadoo sidoo kale sheegatay in qaybaha waxbarashada,shaqada iyo kuwo kale oo aan halkan lagu soo koobi karin ee Gobolka ay dumarku ka maqan yihiin oo loona baahan yahay in wax laga qabto oo ay kamid yihiin tacadiyada qaar kamid ah taasi oo keeni karta in maalin dumarku lee yihiin ay ka dhalato Gobolka.